खाना Archives - बडिमालिका खबर
गाई, भैंसीे, बाख्रा, ऊँट, याक र केही वनस्पतिको दूधबाट दही तयार गर्न सकिन्छ । वनस्पतिजन्य दूधमा भटमास, धान, नट्स, बदाम तथा नरिवल आदिबाट दही तयार गरिन्छ । यस्तो दही जनावरजन्य दूधमा पाइने ल्याक्टोज एलर्जी हुनेहरूको लागि र भेगान वर्गको लागि लाभदायक हुन्छ । दही प्रशोधित दुग्ध पदार्थ हो, जुन निकै स्वादिलो र स्वस्थकर हुन्छ । […]
धूमपान मुटु र मस्तिष्कलाई पनि घातक
काठमाडौं — चुरोट एवं सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने बानी छ ? छ भने, आजै÷अहिल्यै छोड्नुहोस्। नत्र तपाई क्यान्सरको घरभित्र छिर्दै हुनुहुन्छ। सुर्तीमा ४३ वटा क्यान्सर लगाउने तत्त्व हुन्छन्। यसको सेवनपछि क्रमशः खानामा रुचि नहुने, पेट गडबडी हुनेदेखि शरीरका विभिन्न अंगमा क्षति पुर्‍याउने चिकित्सकहरू बताउँछन्। धूमपानले आँखाको दृष्टि क्षमतामा असर गर्ने, श्वास गन्हाउने, गिजा बिग्रिने, मुखमा […]
काठमाडौं — हाम्रो भान्सामा विभिन्न प्रकारका सागसब्जीको प्रयोग हुन्छ । टमाटर, पालक, लौका जस्ता तरकारी पोषणले भरिपूर्ण हुन्छन् भने धनियाँ र कढीपत्ता औषधिको रुपमा पनि प्रयोग गर्न गरिन्छ । तर तरकारी पकाउने बेलामा भने हामी त्यति ख्याल भने गर्दैनौं । तरकारी पकाउँदा पौष्टिक तत्व नष्ट हुनेगरी धेरैबेर पकाउने गर्छौं । तरकारीलाई कम पकाएर त्यसमा भएको […]
आयल निगम र उद्योगीबीच टकराव : ग्याँस पाउनै मुस्किल
काठमाडौं — काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिका–१ स्थित रानीवन बस्ने शर्मिला सुवेदीले नजिककैको ग्याँस पसलमा खाना पकाउने ग्याँसका लागि नाम टिपाएको तीन दिन भइसक्यो । घरमा प्रयोग भइरहेको अर्को सिलिण्डरको ग्याँस रातो बल्न थाले लगत्तै उनले खाली सिलिण्डर भर्न बिक्रेताकोमा नाम टिपाएकी थिइन् । तर, ग्याँस पाउन अझै केही दिन लाग्ने जानाकारी उनले बिक्रेताबाट पाएको छ । […]
दुई गुणासम्म किन बढ्यो कागतीको भाउ?
पछिल्लो समय नेपाली बजारमा कागतीको मूल्य दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा कागतीको मूल्य बढेपछि त्यसको असर यहाँ परेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। कालिमाटी तरकारी बजारमा कागतीको होलसेल मूल्य नै दुई गुणासम्म बढेको छ। बुधबारको थोक मूल्य सूचीअनुसार कालिमाटीमा कागती प्रतिकिलो तीन सय ७५ रूपैयाँसम्म बिक्री भएको देखिन्छ। गत वर्ष यो अवधिमा कागतिको थोक […]
काठमाडौं — नुन खानाका लागि सोडियमको प्रमुख स्रोत हो । हाम्रो शारीरिक प्रक्रियामा विभिन्न किसिमले सोडियमको आवश्यकता परेको हुन्छ । कोशिकाले ठीकसँग काम गर्नका लागि शरीरमा रहेको तरल पदार्थ र इलेक्ट्रोलाइट्स सन्तुलित रहोस् र ब्लड प्रेसर कन्ट्रोल गर्नका लागि पनि सोडियमले भूमिका खेल्ने गर्छ । यसकारण सोडियम हाम्रो शरीरको एक जरुरी हिस्सा हो । यसका […]
ग्याँस उद्योगहरूले रोके ग्याँस बिक्री
काठमाडौं — नेपाल आयल निगमले कमिसन कटौती गरेको विरोधमा ग्याँस उद्योगहरुले आजबाट बिक्रेताहरुलाई ग्याँस बिक्री वितरण बन्द गरेका छन् । कमिसन कटौतीको विरोधमा नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एशोसिएसन, नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ र नेपाल एलपी ग्याँस उद्योग संघले संयुक्त रुपमा आन्दोलन गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वय समितिको आह्वानमा पूर्वघोषित आन्दोलनका […]
दैनिक चाउचाउ खानु हानिकारक
धनगढी– दैनिक नास्ताको रुपमा धेरैले चाउचाउ रुचाउछन्। तर चाउचाउले शरिरमा धेरे हानि पुर्याउने अध्ययनले देखाएको छ। अध्ययन अनुसार चाउचाउ खानु रसायन खानु बराबर रहेको देखाएको छ। चाउचाउमा हुने मैदा मानव स्वास्थ्यका लागि मन्दविष जस्तै रहेको मासाच्युसेट्स जनरल हस्पीटलका डाक्टर ब्राडेन कुओको अध्ययनले देखाएको छ। जसले सुस्तसुस्त रुपमा शरीरलाई कमजोर बनाउँछ। त्यस्तै चाउचाउमा हुने तेल र […]
युक्रेनबाट कच्चा पदार्थ नआएपछि घट्यो खाने तेलको उत्पादन
कच्चा पदार्थको अभाव देखाएर उद्योगीले खाने तेल उत्पादन घटाउन थालेका छन् । युक्रेनबाट आयात हुने सूर्यमुखीको कच्चा तेल रोकिएको भन्दै सुनसरी–मोरङ कोरिडोरका उद्योगले उत्पादन कटौती गरेका हुन् । युक्रेनमा बन्दरगाहबाट नेपालका लागि चलान तयारीमा रहेको जहाज रद्द भएको उद्योगीले बताएका छन् । नेपालका उद्योगले मगाएको ५० हजार टन सूर्यमुखीको तेलको कच्चा पदार्थ रोकिएको उद्योगीहरूले जनाएका […]
कलेजो खराब गराउने खानेकुरा
कलेजो शरीरको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अंग हो । मस्तिष्कजस्तै संवेदनशील र जटिल अंक हो कलेजो । कलेजोको मुख्य काम शरीरको विशाक्त पदार्थ बाहिर निकाल्नु हो । यसका साथै, पाचनप्रक्रिया, मेटाबोलिज्मलाई सन्तुलनमा राख्छ । पोषक तत्वहरुलाई भण्डारण पनि गर्छ । त्यसैले कलेजोलाई स्वस्थ राख्न जरुरी छ । दैनिक गरिने केही क्रियाकलाप र खानपानले कलेजोलाई असर पुर्याइरहेको हुन्छ […]
शिवरात्रिमा भाङ खाएका युवकको मृत्यु
धनगढी — शिवरात्रिमा भाङ खाएका सल्यानमा एक युवाको मृत्यु भएको छ। मंगलबार भाङ खाएर घर फर्किएपछि दार्मा गाउँपालिकाका १७ वर्षीय हिमाल विक्रम चन्दको मृत्यु भएको हो। मंगलबार शिवरात्रिमा दिउँसो अरबारे भन्ने स्थानमा घुम्न गएका बेला भाङ खाएर घर फर्किएपछि उनी बेहोस भएका थिए। दार्मा गाउँपालिका ३ फारुलाको दोभान पोलिक्लिनिक प्रालिमा उपचारका लागि लैजाने क्रममा उनको […]
किन बढेको बढ्यै छ खाने तेलको भाउ?
कोरोना सुरू भएदेखि नै दैनिक उपभोग्य सामानहरूको मूल्य आकासिएको छ। यसमध्ये उपभोक्तामाझ सबभन्दा बढी चर्चा खाने तेलको भाउको छ। पछिल्लो डेढ वर्षमा तेलको भाउ निरन्तर बढ्दै झन्डै दोब्बर भइसकेको छ। २०७६ पुसदेखि तेलको मूल्य थोरैथोरै बढ्न थालेको हो। सुरूमा लिटरमा ५–१० रूपैयाँ बढ्दा उपभोक्ता र अनुगमन गर्ने निकाय दुवैले वास्ता गरेनन्। जब २०७७ भदौ–असोजसम्म असामान्य […]
बासी दालको सेवन हुुनसक्छ खतरनाक
नेपालको भान्सा धेरैजसोको भोजनमा दाल पाक्ने गर्छ । दाल प्रोटिनको राम्रो स्रोत हो । तर, यही दाल जब बासी हुन्छ, स्वास्थ्यका लागि हानिकारकसमेत हुनसक्छ । भारतकी डाइटियिन तथा न्युट्रिसियन शिल्पा मित्तलले दाल सेवनको नोक्सानी र दाल खाने सही तरिका बताएकी छिन् । बासी दालले बिरामी बनाउन सक्छ दाल हाम्रो भोजनको महत्वपूूर्ण हिस्सा हो । प्रोटिनले […]
व्यवसायीले आफूखुसी बढाए खाने तेलको मूल्य
काठमाडौं– व्यवसायीहरुले आफूखुसी सबै प्रकारका खाने तेलको मूल्य बढाएका छन् । उनीहरुले दुई साताको अवधिमा तोरी, भटमास र सूर्यमुखी गरी तीनै प्रकारका तेलको मूल्य बढाएका हुन् । नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अनुसार भटमास र सूर्यमुखी तेलको मूल्य लिटरमा १० रुपैयाँले बढेको छ भने तोरीको तेलको मूल्य लिटरमा दुईदेखि तीन रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । नयाँ […]
काठमाडौं — मध्य एसियाली मुलुक काजकस्तानमा उत्पन्न अशान्तिका कारण यो हप्ता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढेको छ । काजकस्तान पेट्रोलियम पदार्थ निर्यात गर्ने मध्य एसियाकै ठूलो मुलुक हो । २०२० मा त्यहाँ प्रतिदिन झण्डै १८ लाख ब्यारेल तेल उत्पन्न भएको थियो । त्यस्तै पेट्रोलियन निर्यात गर्ने मुलुकको संगठन ओपेक प्लसमा रहेका राष्ट्रमध्ये रुसपछि सबैभन्दा धेरै […]
शरीर पूर्ण रुपमा स्वस्थ राख्नका लागि आहारमा ती खानेकुरा समावेश गर्नुपर्छ, जसबाट हामीलाई आवश्यक पोषक तत्व मिलोस् । धेरैजसो हामी भोजनको माध्यमबाट प्रोटिन, भिटामिन र आइरन प्राप्त गर्छौैँ । तर हामीले केही यस्ता पोषक तत्वको जानी नजानी बेवास्ता गर्दै आएका छौ, जुन राम्रो स्वास्थ्यका लागि अत्यावश्यक मानिँदै आएको छ । ओमेगा–थ्री फ्याटी एसिड शरीर र […]
आलुको प्रयोग हरेक घरमा हुन्छ । आलुलाई नेपाली भान्सामा तरकारीको ‘राजा’ भन्ने गरिन्छ । यसलाई जुनसुकै तरकारीसँग पनि मिसाएर पकाउन सकिन्छ । आलु धेरै खाएमा मोटोपन बढ्छ । त्यसैले धेरै मानिसहरु तौल कम गर्नका लागि आलुको सेवन पनि कम गर्ने गर्छन् । तर, आलुको सेवन सही मात्रामा सही तरिकाले गर्दा तौल सन्तुलनमा रहने विज्ञहरु बताउँछन् […]
गुणकारी तत्वले भरपुर तुलसीको पातको उपयोग विभिन्न प्रकारको उपचारमा गरिन्छ । यसको एन्टी ब्याक्टेरियल, एन्टी फंगल र एन्टी भाइरल गुण प्रतिरोधी क्षमताका लागि उत्कृष्ट मानिन्छ । विज्ञकमा अनुसार तुलसीको पातको चिया दैनिक पिउँदा यसले हाम्रो छालामा निखार ल्याउनुका साथै यसले चाउरी पर्ने गतिलाई पनि ढिलो पार्छ । खाली पेट तुलसीको पात सेवन गर्दा कस्ता फाइदा […]
सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो दिनमा ८ देखि ९ गिलास पिउनुपर्छ । पानीले शरीरमा भएको विषालु पदार्थहरूलाई बाहिर फाल्ने काम गर्छ । नियमित भरपुर पानी पिउँदा विभिन्न प्रकारका रोगबाट पनि बच्न सकिन्छ । तर पानी पिउने सही तरिका हुन्छ । जतिबेला मन लाग्यो त्यतिबेला टन्न पानी पिएर मात्र शरीरलाई स्वस्थ बनाउन सकिदैन । पानी पिउँदा […]
हावामा फैलिएको प्रदुषण फोक्सोका लागि निकै खतरनाक हुन्छन् । डाक्टरका अनुसार प्रदूषणका स–साना कणले हाम्रो फोक्सोलाई ठूलो हानी पुर्याइरहेको हुन्छ । प्रदूषणबाट फोक्सोलाई बचाउन केही खानेकुराले निकै फाइदा पुर्याइरहेको हुन्छ, त्यसैले यस्ता खानेकुरालाई तपाईंले आफ्नो खानामा समावेश गर्नुपर्छ । सख्खरः प्रदुषणबाट फोक्सोलाई बचाउनका लागि सख्खर निकै लाभदायी हुन्छ । यसको प्रयोग गरेर तपाईं प्रदुषण वा […]